1161 June 5, 2017
DVB TV – ဆိတ်သားမုန့်လုပ်နည်း လူတိုင်းချက်နိုင်တယ် ထုတ်လုပ် / တင်ဆက် – အောင်မိုးသူ
1177 May 31, 2017
မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် နေရပ်ပြန်ဖို့ခက်ခဲနေသေးတဲ့ ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူဒေသက စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ အကြောင်း Close-up အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ DVB TV – 31.05.2017
သောက်သုံးရေ အခက်အခဲအတွက် ထောင်ကြီးတန်းကျေးရွာ ကြိုးစားခဲ့ပုံ
1553 May 31, 2017
ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံခရိုင် အမာမြို့နယ်ထဲက ထောင်ကြီးတန်းကျေးရွာလေးမှာ သောက်သုံးရေ အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ သူတို့ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲတွေအတွက် ဒေသခံတွေနဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေ ဘယ်လိုတွေ ကြိုးစားခဲ့ကြရသလဲ၊ ဒီတပတ် တယောက်တလက် Fix it အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ DVB TV – 31.05.2017
1421 May 30, 2017
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်နိုင်ငံကို နမူနာယူမလဲ?
1746 May 30, 2017
DVB Debate – မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်နိုင်ငံကို နမူနာယူမလဲ? “ကျနော်တို့ဆီမှာက စစ်ပွဲက ဈေးကြီးတယ်. ငြိမ်းချမ်းရေးက ဈေးချိုနေတယ်ဗျ” ဦးအောင်နိုင်ဦး – ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင်(ဟောင်း)၊ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ “တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်ကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိဘူး၊ အစိုးရဘက်ကလည်း ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိဘူး၊ တပ်ကလည်း မရှိသေးဘူး။ တွေ့ဆုံ စကားပြောလိုက်တိုင်းမှာ ဘာလိုချင်ကြတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိမှ ရမယ်” ဒေါက်တာ ရွှေခါး(ရ်) – တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ၁၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး “တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီမှုဆိုင်ရာ စာချုပ် .အန်စီအေကို ရီဗျူးလုပ်ဖို့ လိုနေပြီ. ပြင်ဖို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး” ဦးမောင်မောင်စိုး – မြန်မာ့အရေး/တိုင်းရင်းသားအရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ DVB TV – 21.05.2017
1466 May 30, 2017
ကမ်းပြိုမှုတွေကြောင့် ပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့ ကျေးရွာတွေနဲ့ close-up အစီအစဉ် ကမ်းပြိုတဲ့ဒါဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရတဲ့ ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့နယ်ထဲက မက်မောက်ရွာနဲ့ အနီးတဝိုက်ကို အနီးကပ်တွေ့မြင်ကြရပါမယ်။
အိုင်သပြု ကျေးရွာလေး ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အကြောင်း
1265 May 30, 2017
ဧရာဝတီတိုင်း လေးမျက်နှာမြို့နယ် အိုင်သပြု ကျေးရွာက ကမ်းနားတန်းရပ်ကွက်က အိမ်ခြေ ၅၀ ကျော်ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ကမ်းပါးပြိုပြီး အိုးအိမ်တွေ ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ သူတို့ ရဲ့ အိုးအိမ်အသိုက်အမြုံအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ဒေသခံတွေနဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း တယောက်တလက် အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။
သတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး ဥပဒေကြမ်း ဘယ်တော့လဲ?
1022 May 21, 2017
သတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး ဥပဒေကြမ်း ဘယ်တော့လဲ ? အရင်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်းရေး ဆွဲနေတဲ့ “သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး ဥပဒေကြမ်း” ဟာ မူကြမ်းအဆင့်ထိ ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပေမယ့် အခု ချိန်အထိ ဥပဒေကြမ်းအဖြစ် မထုတ်ပြန်နိုင်သေးပါဘူး ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၅ နိုင်ငံမှာ ဒီဥပဒေပြဌာန်းထားပြီး ဖြစ် သလို အာရှတိုက်မှာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်မှာ ပြဌာန်းပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ အတွက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်းလွတ်လပ်မှုအဆင့် မှာ မြန်မာနိုင်င်ငံဟာ မနှစ်ကအညွှန်းကိန်းထက် ၁၂ ဆင့် တက်လာပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သတင်းမီဒီယာ သမား တွေကတော့ ဒီလိုအဆင့်တက်လာတာဟာ စာနယ် ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်လာတာလို့ …Read more »